क्रान्ति आवेगमा होइन, विवेक र योजनामा बढ्छ : विप्लव - Janabato
वार्ता अधिक लालायित र अधिक त्रसित हुने विषय होइन ।
२०७८ साउन १८ गते सोमबार ०९:१९ मा प्रकाशित
४ महिना, ३ दिन, ३ घन्टा अगाडि
४६१ जनाले हेरिएको
(सरकारले यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सयौं नेता कार्यकर्ता जेल हिरासतमा रहेका छन् । नेकपाले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था फालेर श्रमिक जनताको नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा सहित अहिले संघर्ष गरिरहेको छ । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देश संकटमा परिरहेको कारण संघर्षलाई तेजबोध गर्न नसकिरहेको नेकपाले बताएको छ । भर्खरै राज्यको तीव्र दमन, धरपकड र गिरफ्तारका वावजुद नेकपाले देशभर ७ औं पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाएको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवसँग देशको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको अवस्थाका बारेमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः)
तपाईहरुले भर्खरै मङ्सिर ८ गते देशभर पार्टी पुनर्गठन दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु भएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको महत्व के छ ?
हामीले भर्खरै पार्टीको ७ औं पुनर्गठन दिवस देशभर उत्सवको रुपमा मनाएका छौं । दिवसमा हज्जारौं नेता, कार्यकर्ता, सहिद, वेपत्ता, घाइते योद्धा, जनमुक्ति सेना र श्रमिक जनताले उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् । इतिहासमा कुनै दिन विशेष महत्वका हुन्छन् । समाजलाई नयाँ जग हालिदिन्छन्, ढोका खोलिदिन्छन् र मार्गनिर्देशन गर्छन् । मङ्सिर ८ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि त्यस्तै महत्व राख्ने ऐतिहासिक दिन हो । यसले ढाल्न थालिएको कम्युनिस्ट क्रान्तिको झण्डालाई खोसेर उँचो पार्यो । निराशामा डुब्न थालेको आन्दोलनलाई प्राण भर्यो । श्रमिक जनता र कम्युनिस्टहरूलाई आमूल परिवर्तन र वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादतिरको विश्वास बचाइदियो । जीवन दिने दिनको महत्व कति हुन्छ, त्यति यसको महत्व छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रियताको बिषय असाध्यै संवेदनशील बनिरहेको छ । एमसीसी प्रकरण, बिआरआई, नयाँ नक्सा र भारतीय खुफिया संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसित प्रधानमन्त्री वली लगायत संसदीय नेताहरुको गोप्य भेट आदिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । पछिल्ला यी घटनाक्रमहरुलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
दलाल पूँजीवादको दुःख नै यसको अनिश्चयता र सङ्कट हो । परनिर्भर जीवनमा बाँच्नुपर्ने भएकोले यसलाई जतिखेर जसले पनि नचाउने, खेलाउने र भोगगर्ने समस्या बनिरहन्छ । राज्य व्यवस्था जति अस्थिर बन्छ, त्यति बाह्य तत्वहरु छिर्न भ्याउँछन् । जति सङ्कट पैदा हुन्छ, त्यति हस्तक्षेप बढाउँछन् । अहिले त्यसै भइरहेको छ । अव त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशीले अनुदान या ऋण दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ! अनि कसरी देश माथि जान्छ ?
अहिले सरकारप्रति जनआक्रोश तीव्र छ । सत्ताबाहिर रहेका वाम घटकहरुले खासगरी पार्टीका मोर्चा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारको विरुद्ध विरोध गरिरहेका छन् । यी आक्रोश र असन्तुष्टिहरुलाई जनक्रान्तिमा बदल्न सकिने सम्भावना कत्तिको छ ?
एकदमै सही कुरा हो कि देशको अस्थिरता, अराजकता र सङ्कटले क्रान्तिको आवश्यकता माग गर्छ । ऐतिहासिक नियमले भन्छ–आज जनताको असन्तुष्टि, युवा विद्यार्थीहरूको सङ्घर्ष र सारा विरोधहरू भित्र क्रान्ति हुर्किरहेको छ । त्यसले जव आफ्नो मासमहिना पुरा गर्नेछ, क्रान्तिले अवश्य जन्म लिनेछ ।
सरकारले छिटपुट रूपमा तपाईको पार्टीसित बार्ताको हल्ला समेत चलाइरहेको छ । यसबारे पार्टीको धारणा के छ ?
हो, पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलेको छ । तपाईले भन्नुभएजस्तै यो केवल सङ्गठनात्मक विषय मात्र नभएर सैद्धान्तिक विषय पनि हो । यसको अर्थ हो–पार्टी वस्तु भएकोले यसलाई वेला पुगेपछि होसियारीपूर्वक सफा र स्वस्थ बनाउँदै जानुपर्छ । बालीनालीलाई गोडमेल गरेजस्तो गर्नुपर्छ । अर्को अर्थमा आफुलाई रूपान्तरण गर्दै अरुलाई पनि रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ ।
हामी एकीकृत जनक्रान्तिमा प्रवेश गरेपछि यसलाई बुझ्ने, पकड्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा केही वैचारिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक समस्याहरू देखा परे । पूर्वजका केही गुण नवजातमा देखिने डार्बिनको जीव सिद्धान्त अनुसारका चरित्रहरू देखिन खोजे । हामीले बढो संयमतापूर्वक तर दृढताका साथ तिनलाई रूपान्तरण गर्नेतिर बढाएका छौं । यसलाई एउटै अभियानमा पुरा गरिहालिन्छ भन्दा पनि निरन्तर गर्दै जानुपर्छ । किनकी पार्टीको अवस्था स्वस्थ नभएसम्म क्रान्ति हाँक्न र पुरा गर्न सकिदैन ।
सही भन्नु भयो, केही नयाँ तरङ्गहरू पैदा भए । शुद्धीकरण अभियान हाम्रो पार्टीले चलाएको भएपनि यो आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । जव पार्टी जनताको आवश्यकता, जीवन र भविष्यसँग जोडिन्छ, तव असल पार्टी बनाउने बिषय जनताकै सरोकार बन्न पुग्छ ।
शुद्धीकरण चल्दै गर्दा पार्टी रूपान्तरित बन्दै गएको छ । जनताले जीवन ठान्ने र जीवन दिने पार्टी बनाउनै पर्छ । यो अवश्य बन्छ भन्ने विश्वास छ ।
सरकारी नेकपाभित्रको तिक्ततापूर्ण सङ्घर्षपछि कैयौं नेता कार्यकर्ताहरूले खुलेरै तपाईको नेतृत्वको नेकपाबारे सकारात्मक धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरूसँगको छलफल र धु्रवीकरणबारे केही सोँच्नु भएको छ ? उनीहरू आउन चाहे भने क्षमता अनुसारको जिम्मा दिन सक्नु हुन्छ ?
विज्ञान अनुसार कुनै वस्तु विघटन हुन्छ भने अर्कोतिर सङ्घटन भइरहेको छ । विनाश हुँदा निर्माण भइरहेको हुन्छ । क्षयीकरण हुँदा धु्रवीकरण हुन्छ ।
जहाँ सङ्घटन, विकास र जीवन हुन्छ, त्यहाँ एकताबद्ध बन्ने कुरा आवश्यक, उचित र अनिवार्य हुन्छ । इमान्दार कम्युनिस्टहरू जहाँ भएपनि हामीले आफ्नो कार्यभार ठानेर यो कार्य पुरा गर्नुपर्छ । क्रान्तिलाई पुरा गर्न तयार हुने कुनै पनि कमरेड बराबर हैसियत हुन्छन् । यसमा कुनै शङ्का गर्न जरुरी छैन ।
समाजवादी शिविर कमजोर छ भन्ने तर्क सम्पूर्ण क्षेत्रबाट हेर्यो भने सही हुँदैन । स्तालिन, माओ, फिडेल, किम, हो ची मिन्ह हुँदाको स्थितिबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन सक्छ तर आज पनि विश्वको मुख्य वैचारिक, राजनैतिक सङ्घर्ष भूमण्डलीकृत पूँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादकै बीचमा छ ।
जहाँसम्म कम्युनिस्ट अन्तराष्ट्रियको सवाल छ, त्यो श्रमिक वर्गीय अपेक्षा र क्रान्तिको आवश्यकताको स्तरमा सुदृढ छैन । तर विभिन्न रूपमा त्यसका प्रयत्न भइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले पनि कम्युनिस्ट अन्तराष्ट्रलाई संगठनात्मक रूप दिन प्रयत्न गरिरहेको छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासले यसलाई सहज बनाउँदै जाने विश्वास छ ।
अर्को विषय नेपालमा क्रान्तिका लागि निश्चय नै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो पर्छ तर निर्णायक नै त्यो होइन । नेपाली क्रान्तिको निर्णायक पक्ष भनेको नेपाली श्रमिक जनता, क्रान्तिका मित्रशक्ति र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीचको एकता र यसको वस्तुवादी योजना हो । यसमा निकै राम्रो अनुकूलता विकास भएको छ ।
हो केही समयमै यी दुई कम्युनिस्ट विचारक, नेता र कमरेडहरूको जन्म दिवस आउँदै छन् ।
कमरेड स्टालिनको मुख्य योगदान पहिलो समाजवादी देशमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र वैज्ञानिक समाजवादको रक्षा बन्यो । पूँजीवादीहरुको तारो बनेको वैज्ञानिक समाजवाद र कम्युनिस्टहरूलाई धुलो पार्छु भनेर रूस छिरेको फासिष्ट हिटलर समाजवाद र कम्युनिस्टहरूकै कारण धुलो चाट्नु पर्यो । ‘मै हुँ’ भनेर कुम उचाल्दै हिँडेको पूँजीवादी दुनियाँ आर्थिक मन्दीमा फस्दा रूस निरन्तर उच्च विन्दुतिर लम्क्यो ।
कमरेड माओको योगदान पहिलो समाजवादी देश रूसमा गद्दार खु्रश्चोभले प्रतिक्रान्ति लादेपछि वैज्ञानिक समाजवादको रक्षा गर्न विकास गरेको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो । जो चीनमा प्रयोग हुँदा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा देखा पर्यो ।
आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रूस र चीनका दुवै समस्यामा परिरहेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्टालिनको स्मरण भनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षा र क्रान्तिको बचाउ हो । माओको स्मरणको सम्बन्ध विचलनबाट क्रान्ति बचाउन निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु हो । हाम्रो निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिलाई सफल पार्नु सर्वाधिक कार्यभार हो ।
जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चद्वारा सङ्गठन बिस्तार तिब्र
जनमत संग्रह वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने माध्यम हो : विप्लव